တစ်ဦးကဥရောပလမ်းကြောင်းအစီအစဉျသင်ဟာသွားလာရန်ကူညီပေးသည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တစ်ဦးကဥရောပလမ်းကြောင်းအစီအစဉျသင်ဟာသွားလာရန်ကူညီပေးသည်
တစ်ဦးကဥရောပလမ်းကြောင်း Planner ကသင့်ရဲ့စည်းရုံးရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ဥရောပတစ်လွှားမီးရထားခရီး. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကျော်ရှိပါတယ် 10,000 တဦးတည်းဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နေရာများ. ခရီးစဉ်၏နံပါတ်ကြောင့်, သင့်ရဲ့ခရီးသွား map ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာရန်အရေးကြီးပါသည်က. သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥရောပမှတဆင့်သွားလာသင့်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိချင်. ထိုအနိုင်ရန်အတွက် ရှေ့ဆက်အချိန်အစီအစဉ်, သငျသညျကိုကြိုတင်လက်မှတ်တွေကြိုတင်ယူထားချင်စေခြင်းငှါ. အများစုမှာမှတ်သားဖွယ်သငျသညျနိုငျရနျသငျ့သညျဖြစ်ပါသည် စာအုပ်ရထား ခရီးပါဝင်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သင့်ဘာသာစကားဖြင့်ခွင့်ပြုဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုကယ်ရထားခွင့်ပြု.
ဥရောပလမ်းကြောင်း Planner ကအရေးကြီးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအချက်များ
အားလုံးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသင်လိုအပ်သောခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများရှိသေချာအောင်နှင့်အတူစတင်. အလားတူပင်, သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်မတိုင်မီ, သငျသညျစဉ်းစားရန်လိုပေမည် ပျံသန်းဖို့ပထမဦးဆုံးခရီးသက်ရှင်လျှင်ဥရောပပြင်ပနှင့်မီးရထားခရီးသွားလာနေထိုင်လျှင်အတွင်းဥရောပကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ခရီးသွားဥရောပ. အချက်အချို့ကိုအကြောင်းထင်ဖို့အရေးကြီး၏လက်ရှိခရီးသွားနေကြတယ်; သမိုင်းဝင် က်ဘ်ဆိုက်များ, သဘာဝ, တွေကတော့, ကမ်းခြေ, အစာ, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ.
ပထမဦးစွာ, ကြိုတင်မှာယူမှုများအဘို့အလိုရှိပါသည် ညဥ့်ရထား နှင့်နိုင်ငံတကာအလေ့နှင့်သင်တို့ပြုနိုင်သည်အပေါ်ကယ်ရထား. ကြိုတင်မှာယူမှုများဖြစ်နိုင်သောများမှာ ဒါ့အ intercity မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (အပါအဝင် EuroCity နှင့်အချင်းချင်း). Main intercity routes are Vienna & Linz, Salzburg, Graz & အဆိုပါ Carinthia ခရိုင်. သြစတြီးယားဥရောပလမ်းကြောင်း Planner ကအလွန်ကောင်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားဆက်သွယ်မှုကမ်းလှမ်း. ထို့အပြင်, အများဆုံးရထားပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အဖျော်ယမကာနှင့်မုန် ပေါ်ရရှိနိုင်ပါနဲ့ထမင်းစားခန်း options များ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား. သငျသညျသြစတြီးယားရထားပေါ်တွင်စက်ဘီးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်. သင်လည်းလက်မှတ်တွေများအတွက်သြစတြီးယားဖို့ခွင့်ပြုသောရထားမှခရီးသွားလာ Lichtenstein.
အများဆုံးရထားလ်ဂျီယံအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်, ဒါကြောင့်အများကြီးမဟုတ်အသစ်အဘို့ငါတို့၏ဥရောပစီလမ်းကြောင်းဒီမှာ. ဒါဟာအလွန်အကြံပြုထားသည်အထူးသဖြင့်အဘို့အကြောင်း လေဆိပ်ရထား, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသင်ရှိသည်လိမ့်မည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်မဲအတွက်လုံလောက်သောအချိန်. ထို့အပွငျ, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရထား 1st နှင့် 2nd လူတန်းစားထိုင်ခုံများ. အဆိုပါရထား၏အချို့တစ် mini ကိုဘားနှင့်ပူနှင့်အအေးမုန်ပူဇော်. ဘယ်လ်ဂျီယံအတွင်းခရီးကြိမ်အကြားခရီးနှင့်အတူအစာရှောင်ကြသည်, တာအဓိကမြို့ကြီးများ 20 တစ်နာရီမိနစ်.
အလားတူပင်ဘယ်လ်ဂျီယံဥရောပလမ်းကြောင်းအစီအစဉျမှ, you do not need to makeareservation for most trains in Bosnia. It is not possible to make reservations for ပြည်တွင်းရထား ဘော့စနီးယားအတွက်. ဤသည် Brzi Voz အစာရှောင်ရထားတို့ပါဝင်သည်နှင့်
ခရီးသည် ဒေသဆိုင်ရာ ရထား. အခြားဥရောပနိုင်ငံများမတူဘဲ, စက်ဘီး ဘော့စနီးယားအတွက်ရထားပေါ်တွင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. ထို့အပြင်, ဘော့စနီးယားကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဆာရာယဗေိုဘူတာရုံမှတဆင့်သွားပါ.
You don’t need much of Europe Route Planner in terms of reservations for Barz Vlak local ‘rapid’ ရထားများနှင့်လည်း Patnicheski ဒေသခံရထား. သို့သျောလညျး, သံသယ Expresen Vlak အစာရှောင်ရထားနှင့်နိုင်ငံတကာရထားများအတွက်လိုအပ်သည်. ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရရှိနိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားသည့်ဘူလ်ဂေးရီးယား Express ကိုပါဝင်သည်, အဆိုပါ ပင်လယ်နက်ရထား, အဆိုပါဘူခါရက်အစ္စတန်ဘူလ် Express နှင့်ဆိုဖီယာကနေထွက်ခွာထိုနည်းတူအချို့သောအခြားရထား. ဘူလ်ဂေးရီးယားရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းယူ 6-8 နာရီ (နေ့ချင်းညချင်းရထားဖြစ်နိုင်သောများမှာ) ဆိုဖီယာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေါ့, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများအတွက်အဓိကဘူတာရုံ. သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပိုဆောင်းပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သို့သော်စက်ဘီးရထားပေါ်တွင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်နှင့်အတူဥရောပလမ်းကြောင်းအစီအစဉျတစ်ဦးရထား
ဥရောပတဆင့်သွားလာအဲဒီမှာသန်းအကြောင်းပြချက်ကြောင့်,, အကြှနျုပျတို့သညျထိုတွေ့ပြီ စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေ. ဥရောပအများဆုံးရှိပါတယ် လှပသောရထားဘူတာများ. ထို့အပြင်အလှဆုံးရှုခင်းရှိခြင်းနေတုန်း, အပါအဝင် တံတားများ နှင့်ကမ်းခြေ. ဒါကြောင့်သင်ဥရောပလမ်းကြောင်းအစီအစဉျအတွက်ခရီးသွားလာတိုင်းပြည်စီမံခန့်ခွဲပြီးနောက်, ယူ3မိနစ်ယခုဥရောပတွင်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် တစ်ဦးရထား Save. လူအပေါင်းတို့သည်လူကြိုက်များငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. ငွေပေးချေ.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-route-planner-trains%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း
#bosnia #bulgaria longtrainjourneys ရထားခရီးသွား travelaustria travelbelgium